Iskudhaca Xadaaradaha iyo Muslimiinta Galbeedka
Kulaylihii 1993 ayaa joornalka caanka ah ee la yidhaa Foreign Affairs waxa uu qoray maqaal uu ciwaankiisu ahaa “The Clash of Civilizations1” (hirdanka ama iskudhaca xadaardaha). Maqaalkan oo uu qoray professor caana ah oo la yidhaa SAMUEL P. HUNTINGTON ayaa waxa uu profesorku ku saadaalinayay sida uu noqon doono loolanka quwadaha caalamku dagaalka qaboow ka dib. Aragtidda uu soo bandhigay qoraagani nuxurkeedu waxa ay ahayd in dagaalkii qaboobaa ka dib uu aduunku galay marxalad ay xadaaraduhu (Ilbaxnimooyinku) asaas u noqon doonaa loolamadda iyo isku dhacyda ka dhici doona aduunka. Maqaalkan Huntigton oo markii danbe loo badalay buug waxa uu dhaliyay doodo xoog leh. Waxaa laggaga dooday maqaalkan macaahidda istiraatijiyooyinka siyaasadaha caalamka iyo dhamaanba joornaalada aduunka ugu caansan. Muddo sanaddo ah ayay doodani soctay, laakiin dhamaadkii sagaashamaadkii waa ay yarayd in aad maqasho cid ka hadalaysa aragtidan Huntigton.
Kow Iyo Tobankii September iyo Isku dhaca Xadaaradaha
Arinkani waxa uu is badalay September 11,2001 markii meelo ka midda wadanka Marykanka weeraro loo gaystay. Weeraradani waxa ay soo nooleeyeen aragtidii isku dhaca xadaaradaha. Sagaashamaadkii hadalhaynta aragtidani waxa ay ahayd mid ku kooban macaahida laga barto siyaasadaha iyo dadka akadamiga ah. Laakiin wixii ka danbeeyay 11 September waxa ay hadalhaynteedu u gudubtay qaar ka midda madaxda aduunka. Mr.Blair ka Ingiriisku wuxa uu ku tilmaamay dhacdadaas in ay tahay dagaal lagu soo qaaday xadaarada Galbeedka, Mr. Berlusconi Talyaanigu wuxa uu ku tilmaamay dadka Muslimiinta dad xadaarad liita ka soo jeeda oo doonaya in ay burbiriyaan xadaarada reer Galbeedka oo ah mid horu marsan, madxwaynaha Marykankuna (inkasta oo uu markii danbe isku dayay in uu ka cudurdaarto hadalkaa) waxa uu ku tilmaamay dagaalka uu qaadayo waxa uu igu yeedhay argagixisada in uu yahay dagaal Saliibi ah (dagaaladii saliibiyiinta, waxa weeye dagaaladii ay wadamada kirishanku ku soo qaadeen Muslimiinta). Dhinaca Muslimiinta codadka ku dhawaaqayay dagaalka xadaaraduhu waa ay jireen. Waxaana cododkaa ugu dheeraa kuwii ka soo yeedhayay Binu Ladin iyo Jamaacadiisa. Si kastaba ha ahaatee dhacdadan September waxa ay dhalisay in dadka ka faalooda siyaasadaha aduunka qaarkood ay dhacdooyinka maanta ka dhacaya aduunka khaasatan khilaafaadka u dhexeeya Muslimiinta iyo Galbeedka ay ku fasiraan in ay yihiin bilowgii isku dhacyo badan oo mustaqbalka dhici doona kuwaas oo ku salaysnaan doonaa xadaaradaha ay ummaduhu ka soo jeedaan. Saadaashaasi waa laga yaabaa in ay run noqoto, laakiin su’aal muhiima oo in la is waydiiyaa ay daruuri tahay ayaa aragtiddayda ah “intii xadaaradaha madaxa la isu galin lahaa ma iman kartaa in lagu dhameeyo wada hadal iyo is faham.? “
Xadaaraduhu Ma Is Fahmi Karaan
Jawaabta su’aashani waa HAA waana sida aduunka burbur looga badbaadin karo, laakiin aragtidayda waxaa jira xoogog saamayn wayn ku leh nidaamyada siyaasadaha ee Galbeedka kuwaas oo ka soo hor jeeda in khilaafaadka xadaaradaha wada hadal iyo is faham lagu dhameeyo. Qolooyinkaas sida Huntigton iyo kooxaha Midigta xigga ee Kaniisadaha Galbeedku waxa ay aaminsanyihiin in xadaardadaha kale oo dhan la is fahmi karo laakiin ay aad u adag tahay in Muslimiinta la is fahmo, sababtuna waxa weeye ayay leyihiinn diinta Islaamka oo ah mid dagaal iyo nacayb ku dhisan. Sidaas si leg waxa jira codad Muslimiin ah oo arka in sida qudha ee la isaga celin karo Galbeedku ay tahay dagaal, waayo waxa ay u arakaan Galbeedka 2cadow ay tahay in lala dagaalamo. Inkasta oo xooggaga sidan aaminsani ay yar yihiin hadana waxaad mooda in fikirkoodu yahay ka uu maanta caalmku ku socdo.
Muslimiinta Galbeedka iyo Doorkoda
Hadii uu dagaaalka noocan ah ee ay saadaalinayaan Huntigton iyo asxaabtiisu uu hirgalo waxaan shaki lahayn in dhibta ugu badani ay soo gaadhayso Muslimiinta ku nool Galbeedka. Waayo waxa loo arkayaa Muslimiinta cadow ku dhex jira mujtamaca ay la noolyihiin. Sidaa daraadeed waa in ay Muslimiinta ku nool Galbeedku ka hortagaan in fikirka noocani uu hirgalo. Sida ay uga hortagi karaana aragtidayda waa in ay tusaale fiican ka noqdaan Diinta ay aaminsanyihiin. Sidaas oo kale waa in ay isku dayaaan in Mujtamacyada ay la noolyihiin ay gaadhsiiyaan Mabaadiida dhabta ah ee diintooda. Sababta ay diinta Islaamku aduunka intiisa badan ugu fiday waxa ay ahayd tusaalaha wanaagsan ee ay Muslimiintu ka bixiyeen diintooda. Maantana mar labaad ayay Muslimiinta dhulalkan ku nooli doorkaa ciyaari karaan. Door fuddud ma’aha laakiin malaayinta Muslimiinta ah ee ku nool Galbeedka waddo kale uma furna.!
2 Cayda la caayayo Nabi Maxamed (csw) iyo dadka Muslimiintuna mudooyinkan danbe waxa uu cabirayaa nacaybka ay kooxahani u qabaan diinta Islaamka.
3 Galbeedku waxa uu isugu jiraa qaar Muslimiinta la doonaya burbur, qaar ka soo hor jeeda dagaalka Muslimiinta lagu hayo,shacbi aan wax badan ogayn. Sidaa daraadeed in la isku duubo ilama eeka in ay sax tahay.
DHIBAATOOYINKA HORYAAL SOOMAALIDA QURBAHA
WQ. Siciid Cali Axmed | Ottawa, Canada | GUJI...